I-Attic ethokomele enethala, ibanga lokuhamba ukuya echibini - I-Airbnb
I-Attic ethokomele enethala, ibanga lokuhamba ukuya echibini
La Pobla de Segur, Catalunya, i-Spain
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Katty
U-Katty Ungumbungazi ovelele
Imizuzu embalwa uhamba ngezinyawo ukusuka eSan Antoni Lake. Ilungele izithandani, imindeni enezingane, abahambi nabahambi.
Mina nomyeni wami salungisa leli gumbi elingaphansi. Ifulethi lipholile kakhulu, liyakhanya futhi linamafasitela ngaphandle. Yonke imininingwane yenziwe ngothando nangokuzinikela. I-Terrace ilungele ukuphumula ku-hammock, idle isidlo sakusihlwa ngaphansi kokukhanya kwenyanga futhi ujabulele ukubuka ngasemfuleni oseduze neChibi.
Inala yemisebenzi ongayijabulela eduze: ukugibela, ukugibela izintaba, ukushwiba isibhakabhaka nokuningi.
Iningi lezinto zokwakha esizisebenzisile ezemvelo.
Leli fulethi elivulekile lesitayela se-loft lincane kakhulu, linombhede ophindwe kabili neminye imibhede emibili eyodwa e-mezzanine, ikhishi elivulekile, igumbi lokugezela elinobhavu wokugeza.
Ikhishi elihlome ngokuphelele linebha ehlanganisiwe ukuze ukwazi ukujabulela nabangani ngenkathi ulungisa ukudla.
Kukhona ithala elihlangene, eliseduze nefulethi, futhi lingasetshenziswa inqobo nje uma ukuphumula komakhelwane kuhlonishwa.
ubusuku obungu-7 e- La Pobla de Segur
4.82 · 93 okushiwo abanye
Ukuhamba imizuzu embalwa ungajabulela ukuhamba noma ukugeza emfuleni i-"Noguera Palleresa" noma echibini laseSan Antoni.
Ngasechibini nasemfuleni nasesigodini uzothola izindawo zokudlela ezinhle. Qaphela ukuthi ngesizini ephansi, ezinye zezindawo zokudlela zingase zivaliwe. Kuhlale kunconywa ukuthi ushayele ngaphambili ukuze uqiniseke ukuthi avuliwe.
Idolobhana linezitolo ezinkulu, amahhovisi eposi, amabhange nezitolo zezinhlobo eziningi.
Ifulethi lisendaweni ethule kakhulu ye-la Pobla de Segur, kodwa ngeminye iMigqibelo phakathi no-August kuba namaphathi asemgwaqweni ajabulisa kakhulu, anomculo ongxolayo kuze kube sebusuku.
Le ndawo inezikhala zemvelo ezimangalisayo ongazithola njenge-Aigues Tortes Natural Park, Collegats, Congost de Montrebei, Sierra de Boumort kanye neVall fosca, lapho ungajabulela khona imisebenzi eminingi yangaphandle: ukubuka izinyoni, ukugibela ibhayisikili, ukuhamba ngezinyawo, i-paragliding, ezemidlalo zamanzi, ukukhuphuka. , ukuvakashela amadolobhana amahle, imizila yezemvelo, ukugibela amahhashi, ukushushuluza (imizuzu engama-50 ukusuka ePort Ainé) nokunye okuningi ...
Sizoxhumeka futhi sijabulele ukukusiza ngaphambi nangesikhathi sokuhlala kwakho. Singakuncoma iziqondiso zezintaba, imisebenzi kanye nezindawo ongazivakashela. Uma unezingane, sinezincomo ezimbalwa okufanele sizenze.
UKatty Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: HUTL-001061
Hlola ezinye izinketho ezise- La Pobla de Segur namaphethelo